Maxaad doonaysaa inaad A Laba Wheel Self Dheelitirka Electric mooto - Jomo Technology Co., Ltd
Waxaa lahaa qaar ka mid ah qaabkoodoo lahaa dhibaatooyinka nidaamka batteriga iyo guddiga hoose shaqo ka eryid. Guddiga ayaa waxaa sidoo kale XSKK oo la dareemayaal cadaadis ka jawaabaan ku raacayaa meel alla baddalo miisaankaaga in. Marka loo hoydo Swagtron ah, cagta talaabada 1aad waqti ka dib. Haddii ay dhacdo in aad dib ugu Lulaa, in aad dib u xoojinno. Iyada oo inta badan mootooyinka is miisaamid u adkeysan doonaa xawaare xad-dhaaf ah, joogsiyada lama filaan ah oo overcharging, waxay leeyihiin rabitaan ah in aan u adkaysan miisaanka culus durations dheer waqti. Waxaa ka dhigi kartaa wax badan socdaalka fudud. The Roto-band (ama Koowheel brand ) guddiga ayaa laga yaabaa inuu aad u fudud in safarka iyo dareensan yahay si aad uga badbaado marka la barbardhigo kuwa kale, inta badan, maxaa yeelay, dardargelinta waa sidaas fudud, sidaa daraadeed waxa runtii ma dareemi uusan sidii ay u baahan tahay in aad iska tuur. brand design cusub ee guddiga Koowheel loo baahan yahay in ay dhex maraan noocyo kala duwan oo jeegaga si aad u hesho shahaadada UL 2272.
Marka wakhtigu yimaado si aad ka heli kartaa oo aad hesho wax qaadeen, oo aad u baahan tahay si ay u muujiyaan madaxdii halka aad u samayn, Koowheel ku One patent wadada 8.5inch giraangiraha weyn laba hoverboard wheel K7 samayn doonaa shaqada aad for. Swagway waa ciyaaryahanka da'da yar ee dahab ah ee ganacsiga hoverboard in ay dhacdo saxaafadda. Adduunka ayaa inta badan ay go'aansadeen in ay magacaabaan hoverboard ah. Ogaada ku saabsan qaababka, go'aamada design, Details, fursadaha dheeraad ah oo dhan hadlay oo ku saabsan hoverboards mid mid iyo leedahay fikrad ah wixii hoverboard fiican sida ay baahida iyo jeebka aad. Waayo, kulli-dhul safarka, ee waxaad doonaysid doonaa hoverboard leh lugaha weyn. Laba daqiiqo gudahood dhawrtaan, oo aad dareemi doonaa sida pro in uu ahaa Scootin 'muddo sanado ah. Guddiga Koowheel laftiisa isku dayaysa in sida hoverboard ah, laakiin waxaa hubaal u muuqda in uu ku noqdo sidii dheeraad ah sida lagu skeidgareeyo ah. Ma ahan gaari ah, malana, waa sida hybrid skeidgareeyo iyo mooto in qof kasta oo fuula samatabbixin laga yaabaa in farxad. Ka dib markii reading our Self Dheelitirka mooto hoverboard 2 wheel Easy Qaadashada Rubber 6.5 inch Taayirada Solid LED Lights K8, aad helay fursad u dhigi xulasho. Waxaan rajaynaynaa in qiimaynta waa mid waxtar leh in aad si uu ugu caddeeyo iibsiga xog.
Iyada oo awood u leh inuu si sahlan u gudbaan gudaha ka soo baxay iyo qeybsanaan ku xigeenka, iyagu waa qumman yahay in loo isticmaalo xarumaha macalimiinta, at xafladaha muusikada, iyo wax ka badan. Nasiib wanaag, inta badan, haddii aanay wada, is-dheelli baayacmushtariyaasha mooto suuqa leeyihiin in Sabab hubiyaa in waxyaabaha ay ma noqon doonto dhibaato loogu talagalay dadka si ay u isticmaalaan. Ka dib markii xukumaya booska qaabka jirka la a sax kale tignoolaji deggan dhisay-in, gawaarida maskaxda digital shaqeeya baxay jiho sax via ah microprocessor dhexe ee adag iyo xad-dhaaf ah-orod, batteriga kaxeeya baabuurta si steadiness gaariga. Intaa waxaa dheer, bar ka jilibka jilicsan waxaa loogu talagalay in ay tayadoodii jidka oo aad arki doonaa maamulka sida ay in qalabka la maneuvered karo, sidaas taas oo kuu sahlaysa inaad mahad sax ah ee isteerinka. Waxaa intaasi dheer qoreysa tayo sare leh giraangiraha xarun aluminium iyo Taayirada caag for raacid fudud.
waqti Post: Mar-21-2018